ချမ်းလင်းနေ Chanlinnay: ရင်တွင်းပြတိုက်ထဲက လမ်းပြကြယ်
စာရေးသူ Unknown အချိန် 6:43 AM
Unknown December 30, 2009 at 10:56 AM
ဒီနေ့ ကမ္ဘာအမေများနေ့တဲ့။အမေတွေအားလုံး ပျော်ရွှင်ကြပါစေ။ အမေရေ သားလွမ်းလိုက်တာဗျာ။
အနော် December 30, 2009 at 11:13 AM
အကိုချမ်းရေ အမေများနေ့ အမှတ်တရ အမေ့ကဗျာလေးကိုရော
အကို့ရဲ့ အမေ့တမ်းချင်းလေးကိုရော လာဖတ်သွားပါတယ်
အဝေးရောက်သားသမီးတွေအနေနဲ့ အမေ့ကိုရော မိသားစုကိုရော တမ်းတမိတယ်
အကို့အမေဟာ မြင့်မြတ်တဲ့ဘုံဘဝကနေ အကို့အတွက် ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်နေမှာပါ
ပျော်ရွှင်ဖွယ် နှစ်သစ်လေးဖြစ်ပါစေ အကို
ညလင်းအိမ် December 30, 2009 at 12:14 PM
ကိုချမ်းရေ... ဖတ်ပြီး စိတ်မကောင်းတော်တော် ဖြစ်မိတယ်...
ကဗျာလေးက ပိုလို့ အသက်ဝင်စေတယ်...
်ကိုချမ်းဖြစ်ချင်တဲ့ ဆန္ဒတွေနဲ့ လုပ်ရပ်တွေကို ကောင်းမွန်တဲ့ ဘုံဘ၀က ကိုချမ်းအမေ သိရှိနိုင်မှာပါ...
ကိုချမ်းအတွက် ပျော်ရွှင်ဖွယ် နှစ်သစ်လေးဖြစ်ပါစေဗျာ...
peter kyaw December 30, 2009 at 1:15 PM
ကိုယ့် ညီရဲ့masterpiece ပါပဲလားဗျာ....
လင်းကြယ်ဖြူ December 30, 2009 at 4:17 PM
တကယ်ကို ခံစားချက်တွေ အပြည့်စာထဲမှာ စီးမျောနေတယ်...
အမေကို ချစ်တဲ့ သားနဲ့သူ့မိသားစုလည်းပျော်ရအင်ပါစေ
အဲ့ဒီ့အမေပေးတဲ့ ခန္စာ အသက်နဲ့ တည်နေသ၍
အများအကျိုး ..ကိုယ့်မိသားစုအကျိုးကို ဆထက်တပိုး
ဆောင်နိုင်ပြီး မွေးရကျိုးနပ်သော သားကောင်းတစ်ဦး
အဖြစ် နဲ့ ကျန်နေတဲ့ အချိန်တွေမှာ...
Nge Naing December 30, 2009 at 6:26 PM
အမေအကြောင်း ရေးဖွဲ့ထားတာကို မျှဝေခံစားသွားပါတယ်။ အမေ မေတ္တာကို နားလည်တဲ့ သားမို့ ဘ၀မှာ အောင်မြင်မှာပါ။ နှစ်သစ်မှာ မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ ပြည့်စုံပါစေ။
~ဏီလင်းညို~ December 30, 2009 at 7:54 PM
၀ဲမိတယ်ဗျာ...) ကိုချမ်းမေမေ မရှိတော့တာသိလိုက်ရလို့ဗျာ...။
ကျွန်တော်လည်း မေမေ့ကို သိပ်လွမ်းသွားမိတယ်ဗျာ...။
အောင်မြင်ပျော်ရွှင်တဲ့ နှစ်သစ်ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးခဲ့ပါတယ်...ကိုချမ်း...။
မောင်သီဟ December 30, 2009 at 7:57 PM
Flower December 31, 2009 at 12:23 AM
ဖတ်ပြီးတော့ ရင်ထဲမှာ ထိထိခိုက်ခိုက် ခံစားရပါတယ်.. အမေရဲ့ပုံရပ်လေးကိုလည်း အာရုံမှာ မြင်ယောင် လာအောင်ကို ဖွဲ့သွားနိုင်ပါတယ်.. အမေကို ချစ်တဲ့ သားတစ်ယောက်အနေနဲ့ မရှိတော့တဲ့ အမေ့ကို ခုလိုနည်းနဲ့ ကျေးဇူး ဆပ်ခွင့် ရလိုက်တယ်လို့ သဘောထားပါနော်..
leomark December 31, 2009 at 7:31 AM
ရင်ဘက်ကြီး နဲ့ ခံစားသွားတယ်အကိုရေ... အမေ့ အိမ်ဟာ အနွေထွေးဆုံးပဲ လို့ သိလိုက်ရတဲ့ အချိန်ကြတော့ ကျွန်တော် ဟိုးးးးးးးးးးးးးးး အဝေးကြီးမှာ ရောက်ရှိနေခဲ့ပြီလေ။
ကိုလူထွေး December 31, 2009 at 1:10 PM
ပြုဖူးသမျှ ကုသိုလ်တွေကိုလည်း အမေ့အတွက် အမျှပေးဝေပါတယ်...
ရောက်ရာဘုံဘဝကနေ အမေ သာဓုခေါ်နိုင်ပါစေလေ...
အမေကို ချစ်တဲ့သား ကိုချမ်းလည်း အမေ့ဆန္ဒအတိုင်း ဘဝမှာ တိုးတက်ကြီးပွားပါစေ...
အောင်မြင် အေးချမ်းတဲ့ နှစ်သစ်ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေ...
ခရေညို January 1, 2010 at 7:00 AM
အမေများနေ့ အမှတ်တရ ကဗျာလေးခံစာ:်သွားပါတယ်
mysterysnow January 3, 2010 at 5:34 AM
ကိုချမ်းေ၇းတဲ့စာတွေထဲမှာ ဒီပို့စ်လေးကို အရမ်းသဘောကျပါတယ်...
ဖတ်ပြီးတော့ ၇င်ထဲမှာ မကောင်းဘူး...
အမေနဲ့ ပက်သက်ရင် ခံစားထိခိုက်လွယ်လို့နဲ့တူတယ်..
မြစ်ကျိုးအင်း January 8, 2010 at 8:36 AM
အမေအကြောင်းကို အခုမှ ဖတ်ဖြစ်တယ်ဗျာ
နောက်ကျမှ ဖတ်ရပေမယ့် အမေကို လွမ်းမိတဲ့ စိတ်ကတော့ ချက်ချင်းဝင်လာတော့တာပါပဲ
khun January 9, 2010 at 9:30 AM
သမီးပျို January 13, 2010 at 12:43 PM
ကိုချမ်းရေ.....မရောက်တာကြာလို့ အိမ်လည်လာတာ ကိုချမ်းပို့စ်လေး တော်တော်ကောင်း တယ် အလွမ်းဓါတ်ခံရှိနေသူဆိုတော့ ဖတ်ရတာပိုလို့ ခံစားရတယ် အကိုရယ်။ အမေရှိနေပေမယ့် မိသားစုနဲ့ ခွဲနေရတာ ငယ်ငယ်တည်းကဆိုတော့ ခံစားချက်ခြင်း မတိမ်းမယိမ်းလေ။ ကိုချမ်း အရေးအသားတွေတက်လာ တယ်နော် ။ဆက်ကြိုးစားကိုချမ်းရေ အချိန်ရတိုင်းလာ လည်မယ်နော်
သိင်္ဂါကျော် February 21, 2010 at 12:54 AM
တရားနဲ့ ငြိမ်းချမ်းစွာ ထွက်ခွာသွားခဲ့တဲ့ အမေ ဟာ မြင့်မြတ်ရာ ဘဝမှာ ရောက်ရှိနေမှာ ပါ ကိုချမ်းရေ..
မီးမီးဂျူး ( မေခင် ) February 27, 2010 at 10:00 AM
Hello, I just discovered your website yesterday.
May you please let me know the author of the poem "Wathone Te Tae Thitsar"? Either Chan Lin Nay or Nyein Aye Ein? Thanks for the beautiful poem.
ချမ်းလင်းနေ March 31, 2011 at 7:48 AM
ကျွန်တော် ဘလောက်နာမည်က ချမ်းလင်းနေပါ။ ဝသုန်တည်တဲ့သစ္စာ ကဗျာက ကျွန်တော် ဖန်ဆင်းထားတဲ့ ကဗျာလေးပါ။ ကျွန်တော်ကဗျာ ကလောင်က ချမ်းဧအိမ် ပါ။ ငြိမ်းဧအိမ် မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ။